Yintoni iFlickr kunye nendlela yokukhuphela iifoto | Iindaba zeGajethi
Siqinisekile ngokupheleleyo ukuba, ngamanye amaxesha, uye wafuna indawo apho unokugcina kwaye ugcine imifanekiso yakho ikhuselekile, nokuba ithathwa nguwe, okanye ufuna nayiphi na iprojekthi okanye umsebenzi. Okanye mhlawumbi kuye kwafuneka ufumane uthotho lweefoto ngayo nayiphi na injongo, kwaye ubenele ngokwaneleyo kukukhangela ubude nobubanzi be-intanethi ngaphandle kwesiphumo esonelisayo, nokuba sikumgangatho okanye ubungakanani.
Ewe, impendulo kule mibuzo mibini ilula njengokuthetha igama: Flickr. Awazi ukuba yintoni isihogo? Ewe, kulula kakhulu: yiwebhusayithi esivumela ukuba senze njalo layisha, gcina, khangela, jonga, hlela, ukhuphele kwaye uthenge nemifanekiso kunye neefoto, esekwe kwilifu. Ukuba ufuna ukwazi indlela esebenza ngayo kwaye, ngaphezu kwayo yonke, indlela yokwenza khuphela iifoto kweli qonga, ungaphoswa naziphi na iinkcukacha zokufundisa kwethu.
1 Yintoni iFlickr?
2 Ndizikhuphela njani iifoto ezisuka kwiFlickr?
Njengoko besesichazile ngaphambili, iFlickr ayikho enye into ngaphandle kwe- webhsayithi apho, ngokuxhomekeke kwiinjongo zethu, sinako layisha iifoto zethu ukuze sibe nabo efini, naphi na ngoxhumano lwe-intanethi kunye namandla zihlele ngokusekwe kwiinqobo zokuziphatha esinomdla kuzo, ukongeza ekubeni nakho ukufikelela kwi ilayibrari enkulu yemifanekiso ukuba abantu besithathu bayilayishe, bakwazi ukukhangela kunye nokuhluza ngokusekwe kwinto esiyifunayo.
Ukuba iFlickr idume ngento ethile, kungenxa yokuba nikezela umfoti ongahlawulwayo ngendawo abanokubonisa kuyo umsebenzi wabo, kwaye ube nakho ukwabelana nabo nehlabathi. Nangona isenokungabi nakho ukungena kwe-Instagram, ikwavumela ukuba ulandele abasebenzisi, ucofe iiHashtags kwaye ukhethe ukuba loluphi uhlobo lweefoto esifuna ukuzibona kwiFidi yethu.
Ngaphandle kwamathandabuzo, enye inkuthazo kubasebenzisi ukuba bakhethe iFlickr yindawo ye 1Tb simahla ukugcina imifanekiso kunye neevidiyo, nangona eli nqaku liza kusokola utshintsho olusondeleyo, ukukhawulela Iifoto kunye neevidiyo ezili-1.000 XNUMX kwiakhawunti yasimahla. Ewe kuyakubakho Inguqulelo yepro kubasebenzisi abanqwenela, xa kuhlawulwe € 49,99 ngonyaka, kwaye oko kuyakuvumela, ukongeza ekugcineni umxholo wethu ngendlela engasikelwanga mda, ukulahla iintengiso, ukubhencwa ngakumbi kwabanye abasebenzisi kunye nokubanakho kokulayisha ividiyo kwisisombululo se-5K.
Nangona i-priori ekuphela kwento ebambekayo nenokusetyenziswa yemihla ngemihla yokubhaliselwa kwe-Pro kukugcina okungenamda, ukuba into oyifunayo kukukwazi ukugcina imifanekiso embalwa kwaye, ngaphezulu kwako konke, ukukhangela iifoto ezisemgangathweni onokuzikhuphela okanye Kungenxa yokuba uthanda ukukhuthazwa ngabanye ababhali, nge iakhawunti yasimahla iya kuba ngaphezulu ngokwaneleyo.
Ndizikhuphela njani iifoto ezisuka kwiFlickr?
Ukuba ubucinga ukuba ingaba yintoni Iakhawunti yeFlickr iyimfuneko yokukhuphela imifanekiso ilayishwe ngabanye abasebenzisi, uchanekile. Nangona kuthe cwaka, iakhawunti yasimahla iya kwanela. Kodwa nantsi into efika entliziyweni, kwaye kufuneka sazi ukuba ukukhuphela ifoto kwiFlickr, Umbhali wayo kufuneka agunyazise ukhupheloukuya. Ayizizo zonke ezenzayo, njengoko ingumsebenzi wazo kwaye zithathela ingqalelo ukuba nabani na ofuna ukuba nefoto ekumgangatho owamkelekileyo kuyakufuneka ayibhatale, ngenxa yoko ayiqhelekanga kuthi ukufumana umyalezo othi "umnini ukhubazekile. ukukhutshelwa kwemifanekiso ".
Ke kuhlala kuphela ukuvavanya ukubona ukuba umnini uvumile na ukukhuphela iifoto zakhe. Ukwenza oku, kwifayile ye- ikona esezantsi ngasekunene yomfanekiso ekufuneka siwubonile uphawu lokukhuphela ezimile ngathi lutolo. Sinqakraza kuyo kwaye sikhetha ubungakanani esibufunayo. Ngokucacileyo, ubungakanani obukhulu, kokuphakama komgangatho womfanekiso xa sele ukhutshiwe. Kwi ukuba ukhuphelo lukhubazekileXa ucinezela iqhosha lokukhuphela, kuya kuvela ilivo "Bona bonke ubungakanani", lisivumele ukuba sikhethe ubungakanani esifuna ukuwujonga umfanekiso, ngesiqhelo ukuya kuthi ga kwiipixels eziyi-1600, nangona akuyi kubakho khetho lokuyikhuphela.
Kodwa njengesiqhelo, singathatha iimpumlo ezincinci kwaye sikhuphe ububi esihamba nabo ngaphakathi, kwaye ukuba ufuna ukukhuphela umfanekiso, thabatha umfanekiso weskrini kweyona mbonakalo inkulu esinokufikelela kuyo. Ewe kunjalo, le ndlela ayisayi kusinika umgangatho ofana nalowo siza kuwufumana ukuba sikhuphela umfanekiso ngokusemthethweni, kodwa ubuncinci unokusilungisa ukusebenzisa ukufota ngeenjongo ezingafunekiyo kwinkcazo.
Njengoko ubona, iFlickr sisixhobo esingaziwayo kodwa esisebenzayo xa sifuna njalo Khangela imifanekiso ngomgangatho, nkqu zigcine kwindawo ekhuselekileyo, nokubagcina behlelekile kwaye bekhuselekile njenge yogcino, okanye ukuveza imisebenzi yethu eluntwini. Kunjalo, unokuzikhuphelela iifoto yabanye abantu okoko umbhali eyigunyazisile, nangona kuya kufuneka ukhumbule ukuba ingaphezulu kokucetyiswa, ngenxa yentlonipho kwaye ukunqanda ukugwetywa kwanokuvalwa eqongeni, khankanya umbhali ofanayo nanini na xa isetyenziselwa ukuyipapasha kwezinye iisayithi okanye kwezinye iinjongo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Yintoni iFlickr kunye nendlela yokukhuphela iifoto
UJosetxo Arburua sitsho
Ndifuna ukulinga kancinane kuvavanyo
Phendula Josetxo Arburua